Nidaamka isku xirka qaab-dhismeedka Angular waxaa loogu talagalay in lagu rakibo xirmooyinka dabacsan ama adag ee codsiyada guddiga waxtarka leh
Nidaamyada ayaa loo baahan yahay. Mesh-ku waa bar- alxanka gudaha ama gudaha mesh-ka iyada oo la isticmaalayo xagasha birta aan la samaynin oo ah qaab dhismeed, taasoo ka tagaysa xuduudaha; Ama waxaa lagu alxan karaa dibadda ee jir si loo qariyo xagasha. Malaa'igta birta lafteeda lama dhamaystiri karo;
Sagxadaha bannaanka ah sidoo kale waa la xiiri karaa oo la safayn karaa.
Mesh-qurxinta birta waxay ka kooban tahay biraha birta ah ama fiilooyinka birta ah. Marka loo eego qaabka tolnimada ee dharka, habab kala duwan ayaa ka kooban biraha leexsan ee dhex mara fiilooyinka birta toosan. Agabka la isticmaalo waxaa ka mid ah birta aan la taaban karin, birta chromium ee u adkeysaneysa daxalka oo aad u sareysa iyo biro kale. Waxa kale oo jira midabyo kale oo kala duwan oo dusha sare ah ka dib daaweyn gaar ah, sida dahabka dahabka, dhejinta qalinka, dhejinta titanium, dhejinta daasadaha iyo walxo kale. Waxay leedahay codsiyo badan oo kala duwan iyo saamaynta qurxinta cajiibka ah. Waxay noqotay wax cusub oo la jecel yahay ee farshaxanka guud ee dhismaha.
Alaabta la dhammeeyay waxay noqon kartaa midabka asalka ah ee birta, ama waxaa lagu buufin karaa naxaas, naxaas, naxaas cas, casaan jujube iyo midabyo kale. Dhererka waxa lagu dejin karaa sida la doono.
Codsiga mesh birta ah ee qurxinta
Mesh birta qurxinta dhismaha ayaa si weyn loogu isticmaalaa gudaha gudaha iyo dibadda ee dhismayaasha heer-sare. Sida matxafyada,
Dhismayaasha dawladda, hoolal waaweyn oo lagu caweeyo, hoteello, goobo la dego, dukaamada dahabka lagu iibiyo, wiishka, darbiyada, iwm.
Nooc kasta, cabbir iyo midab waa la beddeli karaa.
Hore: Qurxinta / qaybinta / ee silsiladda aluminium aluminium daahyada mesh birta ah
Xiga: Daahyada Daahyada Qurxinta ee Birta Aan-Aan-la-aanta lahayn ee Xargaha Xargaha